Ny aretina azo avy amin'ny firaisana amin'ny alika | Tontolo alika
Ny alika sy tahaka antsika, matetika dia voan'ny aretina, aretina ary mijaly amin'ny toe-pahasalamana samihafa. Noho izany, tena zava-dehibe izany tandremo fa manana ny vaksiny rehetra foana izy ireo, misakafo araka ny tokony ho izy ary zahao tsy tapaka fa manana hadio madio izy ireo.
Na izany aza, maro ny olona nanontany tena raha ny alika dia mety hahazo aretina venereal, firaisana ara-nofo na STD. Mampalahelo fa ny alika, toa antsika, dia mety voan'ny aretina ihany koa.
1 Aretina azo avy amin'ny firaisana amin'ny alika
1.1 Brucellosis amin'ny alika
1.2 Virosy canine herpes
1.3 Fivontosam-bary azo ampitaina amin'ny kanelina
2 Inona no hatao raha manana aretina azo avy amin'ny firaisana ny alikako
2.1 Ny fanendrena miaraka amin'ny mpitsabo biby
2.2 Fitsapana ireo aretina azo avy amin'ny firaisana
3 Fitsaboana ireo aretina azo avy amin'ny firaisana
3.1 Fitsaboana brucellosis an'ny kanine
3.2 Fitsaboana herpervirus Canine
3.3 Fitsaboana fivontosan'ny venereal azo nafindra
3.4 Fitsaboana leptopirosis
4 Ahoana ny fomba hisorohana ny aretina azo avy amin'ny firaisana amin'ny alika
4.1 Aza mifandray amin'ny biby hafa
4.2 Tandremo ny alika mirenireny
4.3 Fanaraha-maso ny biby
4.4 Mahamarika zavatra hafahafa ve ianao? Ho an'ny veterinera!
4.5 Vaksiny vaovao sy famoahana an-doha
Aretina azo avy amin'ny firaisana amin'ny alika
Ity karazana aretina amin'ny alika ity Izy io dia azo ifanarahana amin'ny fomba 3: amin'ny homamiadana, amin'ny virus na amin'ny bakteria. Androany, ny tahan'ny alika voan'io karazana aretina io dia mihabe ary amin'ny alika dia tsy mandeha izany.
STD amin'ny alika azo ifanarahana amin'ny alika hafa koa ny fifanarahana voan'ny aretina na mandritra ny asa raha voa ny renin'ny alika.
Ny aretina telo voalohany azo avy amin'ny firaisana izay misy fiatraikany amin'ny alika dia:
Virosy canine herpes
Fivontosam-bary azo ampitaina amin'ny kanine
En alika voailika na voahidy tena tsy fahita firy ireo aretina ireo, satria ny ankamaroan'ny tranga mitranga amin'ny alika nania.
Brucellosis amin'ny alika
Ity aretina ity dia heverina ho fahita indrindra amin'ny fanjakan'ny biby, na dia kely indrindra aza ny kaninina. Ity aretina ity dia avy amin'ny bakteria antsoina hoe Brucella canis Ary na dia azo fehezina aza ny aretina dia tsy azo atao hatreto ny manasitrana azy, noho izany dia zava-dehibe ny fizahana hatrany ny alikantsika, na dia alika amoron-dàlana aza matetika kokoa.
Ahoana no famindrana io aretina io? Amin'ny ankapobeny dia amin'ny alàlan'ny alika voan'ny aretina na amin'ny alàlan'ny tsiranoka alika voan'ny aretina. Ity aretina ity koa dia afaka mifindra avy amin'ny alika maty voa vao teraka izy ireo, satria feno ny bakteria ny vatan'ny plasenta manodidina azy ireo rehefa teraka.
Amin'ny vehivavy dia sarotra kokoa ny mamantatra izany noho ny amin'ny lehilahy, satria ny lehilahy ny vatan'izy ireo dia mety ho lasa mirehitraraha ny vehivavy dia mety tsy nahomby tamin'ny fitondrana vohoka na tsy salama.
Io aretina io ihany no azo ampitahaina amin'ny alika mankany amin'ny olombelona ary ny loza dia mitoetra ao amin'ny fifandraisany matetika amin'ny sela sy ny tsiranoka mararin'ny aretina, indrindra raha mifandray tsy tapaka amin'ireo alika bevohoka voan'ny aretina alohan'ny sy aorian'ny fiterahana.
Izany dia iray amin'ireo aretina miely indrindra amin'ny tontolon'ny canine ary heverina ho fiovaovan'ny herpes io, misy aza ny tarehimarika mampatahotra izay manondro izany ny alika hatramin'ny 70% dia mety voan'io aretina io, na dia maro an'isa aza dia mijanona ho latent ary tsy mivoatra.
Toy ny aretina teo aloha, amboa miteraka indrindra izany. Toy izany koa, dia mety hiteraka alika izany rehefa vao teraka sy ilay aretina afaka miseho hatramin'ny 4 herinandro aorian'ny nahaterahany, saingy indrisy fa tsy afaka miaina ireo alika kely ireo.
Ny soritr'aretin'ity aretina ity dia matetika tsy miseho, na izany aza ny alika sasany dia mety misy fery amin'ny taovam-pananahanaNa dia mety malemy aza ny alika kely, tsy dia mihinan-kanina ary tsy miova tarehy ny tarehy.
Fivontosam-bary azo ampitaina amin'ny kanelina
Tsy toy ireo STD roa noresahintsika hatrizay, Ny fivontosan'ny fivontosan'ny kanelina azo avy amin'ny canine izy ireo dia tsy vokatry ny bakteria na virus, satria io aretina io dia karazana homamiadan'ny areti-mifindra.
Afaka miparitaka amin'ny alika iray mankany amin'ny iray hafa izy ireo amin'ny alàlan'ny rora, fifandraisana mivantana amin'ny tsiranoka amin'ny ratra misokatra na mandritra ny firaisana raha toa ka mitoetra ao anaty ny aretina. Aorian'ny fandrosoan'ny homamiadana ao anatiny dia vao manomboka miseho ivelany ny vatan'ny alika voan'ny aretina.
Raha tsy voamarina izany ary tsy voatsabo ara-potoana, fivontosana hitohy hitombo ao anatiny satria hanomboka hiseho ivelany koa izy ireo. Rehefa mihalehibe ny fivontosana dia mety io aretina io miseho eo amin'ny lahy sy vavy ny taovam-pananahana na endrika alika alohan'ny hisehoany amin'ny faritra hafa amin'ny vatana.
Farany, manana ny aretina leptopirosis isika. Raha ny marina dia manam-pahaizana maro no tsy mampiditra azy ao anatin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana amin'ny alika, fa ny iray amin'ireo fomba fifandraisana dia mety ho firaisana ara-nofo, ka tianay ny hampahafantatra azy.
Leptopirosis Matetika izy io dia vokarin'ny areti-mifindra amin'ny otrikaretina voa, ary koa amin'ny tontolo maloto na amin'ny fifandraisan'ny voalavo sy ny alika. Ny olana dia azo ampitaina am-bava sy amin'ny orona koa io, ankoatry ny fanaovana firaisana na amin'ny hoditra. Raha ny marina dia aretina azo tratran'ny olombelona ihany koa io. Izany dia mitranga noho ny bakteria Leptospira, aretina iray izay manafika ny bibidia sy ny biby fiompy.
Inona avy ireo soritr'aretina azonao? Ny fahalemena, ny fandoavana, ny fahaverezan-komana, ny tsy fahatomombanana, ny fivalanana, ny fahaketrahana, ny fihenan-tsaina ... dia miresaka momba ny aretina, mety hiteraka fahafatesan'ny biby izany.
Inona no hatao raha manana aretina azo avy amin'ny firaisana ny alikako
Fantatrao izao ny aretina efatra mifindra amin'ny alika amin'ny alika (ary ny roa azo ampitaina amin'ny olona), fotoana izao hieritreretana izay hatao raha miahiahy ianao fa ny iray amin'ireo alika ireo dia iray amin'ireo aretina ireo. Ary ny dingana voalohany dia ny mankany amin'ny mpitsabo anao.
Ny fanendrena miaraka amin'ny mpitsabo biby
Araka ny efa nolazainay, ny zavatra voalohany rehefa hitanao fa tsy salama ny alikanao dia tokony hanao fotoana amin'ny mpitsabo anao. Amin'izany fomba izany, ny matihanina dia hanombana ny trangao ankoatry ny fanontaniany fanontaniana vitsivitsy aminao, toy ny zavatra hitanao nanatrika ny fakan-kevitrao.
Rehefa avy nanamarina ny satanao ianao, mety hanao fitsapana ra ianao, izay mety ho haingana (ary jereo ny valiny amin'ny toeram-pitsaboana iray ihany), na maharitra 24 ora ny valiny. Na izany na tsy izany, dia hohamarinin'izy ireo ilay raharaha mba hihetsika avy hatrany hamongorana ny aretin'alikao.
Fitsapana ireo aretina azo avy amin'ny firaisana
Ankoatry ny fitsapana ra, azonao atao ihany koa ny manao karazana fitsapana hafa mba hanampiana amin'ny famaritana ny olana ateraky ny alikanao. Mety, ohatra, ny fanaovana fanadihadiana amin'ny seza, ultrasound, biopsies… Hiankina amin'ny matihanina ny zava-drehetra satria izy ireo no olona tsara indrindra hamaritana ireo fitsapana ilainao hamaritana aretina.
Fitsaboana ireo aretina azo avy amin'ny firaisana
Ny fitsaboana ny aretina azo avy amin'ny firaisana amin'ny alika dia miankina amin'ny karazana aretina anananao. Ny tsirairay dia samy manana fitsaboana, ary raha mila fanazavana, ity no mety ho tolo-kevitry ny mpitsabo anao:
Fitsaboana brucellosis an'ny kanine
Na dia tsy mahomby 100% aza ny fitsaboana voalaza momba an'io aretina io dia manamaivana ny alika sy manafoana ireo olana mahazo azy io. Amin'izao fotoana izao, antibiotika dia ampiasaina miaraka amin'ny fanafody hafa, satria ny traikefa dia manamafy fa miasa tsara kokoa izy ireo raha mifangaro. Miresaka, ohatra, izahay momba ny streptomycin, tetracyclines na sulfa.
Fitsaboana herpervirus Canine
Mikasika ny fitsaboana anao, maro ny mpitsabo-ponenana misafidy antiviral, fa ny fahombiazan'izy ireo dia tsy dia tsara, ary imbetsaka izy ireo tsy miasa. Hiankina amin'ny fivoaran'ny aretina koa izany satria raha tratra ara-potoana izy io dia mety hahomby kokoa ireo fanafody. Ohatra, ny fampiasana vidarabine dia mahazatra an'ireo vehivavy bevohoka ary ampiasaina amin'ny soritr'aretina voalohany.
Fitsaboana fivontosan'ny venereal azo nafindra
Amin'ity tranga ity, ny antony lehibe indrindra misafidy ireo mpitsabo biby ny fampiasana fitsaboana simika. Ankehitriny, miankina amin'ny alika tsirairay sy ny hamafin'izay rehetra izany, satria azo ampiasaina ihany koa ny fitsaboana amin'ny radiotherapy, immunotherapy na biotherapy. Raha kely ny fivontosana dia azo esorina amin'ny fandidiana mihitsy aza.
Fitsaboana leptopirosis ho aretina azo avy amin'ny firaisana amin'ny alika dia mifototra amin'ny fampiasana penicillin miaraka amin'ny streptomycin (famonoana bakteria). Indraindray, mahazatra ny alika ihany koa ny manana fitsaboana amin'ny alikaola sy fanafody simptetika hamahana tanteraka ny olana. Indraindray koa dia tsy maintsy mitazona fitsaboana lava ianao mba hialana amin'ny delestazy.
Ahoana ny fomba hisorohana ny aretina azo avy amin'ny firaisana amin'ny alika
Izahay dia tsy te-hanadino fa ny fomba tsara indrindra tsy hiatrehana toe-javatra tsy mahazo aina toy ny alika manana aretina azo avy amin'ny firaisana dia ny fisorohana. Ary mba hanampiana anao hahafantatra ny fanaovana azy dia ireto misy torohevitra vitsivitsy.
Aza mifandray amin'ny biby hafa
Tsy midika akory izany hoe mihidy ny alikanao ianao ary tsy misy ifandraisany amin'ny biby hafa izany, fa ny tianay holazaina kosa tokony hojerenao raha manana olana ireo alika lalaoviny. Amin'ny tranga maro, ny soritr'aretin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana dia hitan'ny maso mitanjaka, ary raha tsikaritrareo fa marary ny alika, na noho izy manana zavatra ara-batana, na noho ny fihetsika hafahafa, dia tsara kokoa ny manatona ny tompony ary raha tsy eo izy dia apetraho ny biby fiompinao mba tsy hifandraisana.
Tandremo ny alika mirenireny
Alika very sy very, amin'ny fiainana iainan'izy ireo, dia mety hahatratra aretina izay azo ampitaina amin'ny biby fiompinao. Izahay dia tsy milaza fa raha mahita amboa mirenireny ianao dia mandroaka azy na miala aminy, fa kosa tokony hitandrina.
Ambonin'izany rehetra izany dia tsara ny tsy alohan'ny alikao hanao firaisana ara-nofo amin'ny alika izay tsy fantatrao na mahasalama izany na misy aretina. Amin'izany dia hisoroka olana ianao. Raha te hanana alika kely ianao ary alika iray fotsiny no tadiavinao ary ny sakaizany no tadiavinao, voalohany indrindra, dia tokony hangataka ianao hizaha ny alika roa hanamarina fa tsy manana aretina azo avy amin'ny firaisana (na raha tsy izany) mametraka ny fahasalaman'ny ray aman-dreny na alika kely.
Fanaraha-maso ny biby
Na dia mety ho sarotra amin'ny maro aza ny manatona mpitsabo an-biby farafahakeliny indray mandeha isan-taona mba hanamarina ny toetran'ny biby fiompinao, dia manomboka izany ny fisorohana tsara indrindra no fomba hialanao amin'ny olana lehibe ao aminy.
Mahamarika zavatra hafahafa ve ianao? Ho an'ny veterinera!
Raha mahatsikaritra zavatra hafahafa ao amin'ny alikao ianao, indrindra raha misy ifandraisany amin'ny taovam-pananahana, dia fotoana izao hanaovana fotoana miaraka amin'ilay matihanina. Arakaraky ny haharetan'io fitsaboana io no tsy dia atahorana ny fahasalamanao, ary zavatra tsy maintsy raisinao izany.
Vaksiny vaovao sy famoahana an-doha
Farany, alao antoka fa vaksin'alika, ary koa ny deworming anatiny sy ivelany, dia havaozina. izany hanampy azy ireo tsara kokoa hiadiana amin'ny aretina izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Afaka mahazo aretina azo avy amin'ny firaisana ve ny alika?
Fa maninona ny alikako no mihena lanja?
Amin'ny firy taona aho no tokony handroaka ny alikako?